Ikhabhinethi kaNksz. Barbara
Wowu, usandula ukufumanisa iqhekezana elimangalisayo lehlabathi. Le khabhathi incinci intle ifakwe kakuhle kwinduli enamahlathi ashinyeneyo eMcIlroy Gap-imizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wedolophu iJasper. Le khabhathi yelog yabucala inako konke okufunayo ukuze uphumle kuxinzelelo lwemihla ngemihla olunokuthi ubomi buphele. Uya kuziva ngoko nangoko ubunzima behlabathi njengoko ungena kule ndlela yokubalekela inomtsalane. Iziqwenga zamandulo kunye nezanamhlanje ngokufanayo zidibana kwikhaya elihonjiswe ngokumangalisayo oqinisekileyo ukuba uyonwabele!
Iveranda egqunyiweyo emangalisayo inika iimbono ezintle zepropathi ejikelezileyo kunye nebhere emnyama ngamaxesha athile. Ingaphakathi lepayini yendalo yonke yekhabhathi ibeka ukukhanya okushushu ngokumangalisayo, kwaye uya kuziva ngathi ubuyile umva ngexesha nje kancinci. Unyanzelekile ukuba ukonwabele ukulungiswa okudala, kubandakanywa ne-claw-foot tub, kodwa ishawari entsha kwibali lesibini ihlala ikhona ukuba i-nostalgia ayiyokomityi yakho yeti. Izitebhisi... ke, zingumnqantsa, ke bambelela kwi-handrail okanye uthathe amathuba akho! Abantwana abancinci baya kufuna uncedo, nangona izitebhisi zabangamaziyo ziye zalawulwa kangangeenkulungwane ngabo banandipha iindawo ezikhethekileyo zobomi.
Ifumaneka kumgama nje weemayile ezimbalwa ukusuka eJasper, le khabhathi ithandekayo ikunika ubumfihlo obufunayo, kodwa ingaphandle kwendlela ebethiweyo, ngenye indlela eyaziwa ngokuba yiScenic Hwy 7! Ukusuka nje phezulu induli kukho iimbono ezimangalisayo zeMcIlroy Gap, kwaye nophahla olubomvu lwekhabhathi lunokubonwa phakathi kwemithi yehlathi elingezantsi! Imbali yeCliffhouse Inn ikwayimizuzu embalwa ukuya emantla, ke qiniseka ukuba ucela uMike itafile enembono entle yeArkansas Grand Canyon. Owu linda, bonke beza ne-vista entle - ke ndiyathemba ukuba awukhathali ngobude obumangalisayo! Ukuba uthatha isigqibo sokuhla intaba ukusuka kwindlwana kunokuba unyuke, ngoko uya kufumana ngokukhawuleza uMlambo iBuffalo udlula nje indawo encinci ye-inki kwimephu ebizwa ngokuba nguMthengisi; kwaye kuya kufuneka ubone amatyotyombe agqwesileyo e-Arkansas e-Hillbilly endleleni. Ukuthatha i-Hwy 74 ukusuka apho kuya kukubuyisela umva ukuya edolophini yaseJasper, apho kufuneka uzame okuthile kwenye yeekhefi zethu. Kwaye, ngelixa ulapho, kufuneka umise kwaye uthi molo kuNksz Emma kwi "Museum of Junk" yakhe emangalisayo! Qiniseka ukuba umxelele ukuba iChip kunye no-Amy bakuthumele, kodwa qaphela ... unokukuthumela ekhaya kunye nekati elincinci elihle! Ndikholelwe, inokwenzeka ngokwenene !!!